अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस आज, योग गर्दा के-के फाइदा हुन्छ ? - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस आज, योग गर्दा के-के फाइदा हुन्छ ?
प्रकाशित मिति: ७ असार २०७५, बिहीबार
काठमाडौं । ग्रेगोरियन पात्रोअनुसार जुन महिनाको २१ औँ तारिख अर्थात् असार ७ गते बिहीबार देशभर विविध कार्यक्रम गरी चौँथो अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस मनाइँदैछ । संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०१५ देखि जुन २१ लाई अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसका रुपमा मनाउन शुरु गरेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस मनाउने व्यवस्थाका लागि सन् २०१४ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । प्रस्तावलाई नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्व सुशील कोइरालाले समर्थन गर्नुभएको थियो । यो प्रस्तावलाई हाल विश्वका धेरै देशले समर्थन गरिसकेका छन् ।
संस्कृत भाषाको योग शब्दको अर्थ जोड्नु भन्ने हुन्छ । ‘योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः’ अर्थात् मनमा आउने विभिन्न विकारलाई हटाउने प्रक्रियालाई नै योग भनिन्छ । योग दिवसका अवसरमा विभिन्न संघ संस्थाले बिहीबार विविध कार्यक्रमको आयोजना गर्ने भएका छन् ।
योगको नियमित अभ्यासबाट स्वास्थ्य राम्रो, कार्यक्षमतामा वृद्धि, चिन्तामुक्त, मानसिक शान्ति, रोग प्रतिरोधी क्षमतामा बढोत्तरी, शरीर, मन र आत्माबीचको समन्वय, सकारात्मक सोचको विकास, अनावश्यक विचारबाट मुक्ति, ऊर्जा प्राप्ति, आत्म ज्ञान प्राप्ति लगायतको सकारात्मक गुणको विकास हुन्छ ।
सभामुख कृष्णबहादुर महराको उपस्थितिमा बिहीबार बिहान छ बजे नेपाल राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान महाराजगञ्जमा योग शिविर संचालन गरिने छ । कार्यक्रममा मन्त्री लगायत विशिष्ट सरकारी अधिकारीको पनि उपस्थिति रहने आयोजक पतञ्जलि योग पीठले जनाएको छ ।
यसैगरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, आयुवेद विभागको आयोजनामा बिहान छ बजे स्वास्थ्य सेवा विभाग टेकुबाट र्‍याली शुरु गरिने आयुर्वेद विभागका महानिर्देशक डा वासुदेव उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो । र्‍यालीमा विद्यार्थी, कर्मचारी, सर्वसाधारण लगायतको सहभागिता रहने छ ।
मन्त्रालयमा आएपछि योग अभ्यास सहितको विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरिने जनाइएको छ । कार्यक्रमलाई उपप्रधान एवम् स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले सम्बोधन गर्नेछन् ।
योग दिवस मूल आयोजक समितिका तर्फबाट शिक्षा मन्त्रालयले दिउँसो साढे एक बजे प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा विचार गोष्ठीको आयोजना गरेको छ । गोष्ठीमा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय योग विभाग प्रमुख डा हरिप्रसाद पोखरेल, आचार्य पथिक, सोनाम साथी र स्वामी आनन्द अरुणले प्रवचन दिने मन्त्रालयका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद गौतमले जानकारी दिए । कार्यक्रम कार्यवाहक प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको प्रमुख आतिथ्यतामा हुनेछ ।
नेपालको अमूल्य निधिका रुपमा रहेको योग, प्राणायाम, आयुर्वेद र जडिवुटीको विकास एवम् विस्तार गरी हरेक व्यक्ति, परिवार, समाज र राष्ट्रलाई नै स्वथ्य, समुन्नत र समृद्ध बनाउने अभियानका साथ योग दिवसको कार्यक्रम गर्न लागिएको हो । योगको उत्पत्ति नेपाली भुमिमै भएको विश्वास गरिन्छ । भगवान्. शिवले पत्नी पार्वतीलाई पहिलो पटक योग शिक्षा दिएको विभिन्न शास्त्रीय वर्णन पाइन्छ ।
शिव र पार्वतीबीचको संवादलाई प्रचारप्र्रसार गरी योग संसारभर फैलिएको थियो । बीचमा लुप्तप्रायः भएपनि पछिल्लो समयमा अन्तर्राष्ट्रिय एवम् राष्ट्रिय योग दिवस मनाउन थालेपछि यसको पुनर्जागरण भएको छ । रासस
लकडाउनको अवधि एक साता थप, अन्तर्राष्ट्रिय उडान प्रतिबन्ध अप्रिल १५ सम्म
काठमाडौं । लकडाउनको अवधि एक साता थप हुने भएको छ । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वमा रहेको […]
दमकमा करेन्ट लागेर एकको मृत्यु
असार ५। दमक, करेन्ट लागेर झापाको गौरादह नगरपालिका-९ वैगुनधुरामा आज बिहान एक जनाको मृत्यु भएको छ । मोटर […]
एटीएम ह्याकपछि राष्ट्र बैंकले भन्यो : ढुक्क हुनुस, तपाईंको बैंक खाताको पैसा सुरक्षित छ
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक खातामा रहेको पैसा कसैले पनि चोरी नगरेको प्रष्ट पारेको छ । शनिबार राति […]
२२औँ विश्व आदिवासी दिवसका अवसरमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घले मङ्गलबार आयोजना गरेको पदयात्रामा महासङ्घका […]
सन्दीप अष्ट्रेलियामा, क्लार्क सन्दीपलाई लिन आफैं पुगे बिमानस्थलमा
काठमाडौं । नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका युवा क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने अस्ट्रेलियाका पूर्वकप्तान माइकल […]
महँगीले उपल्लो मुस्ताङी ढिके नुनकै भरमा
साउन १२ । काठमाडौँ, उपल्लो मुस्ताङका सर्वसाधारण चर्को मूल्यका कारण अझै ढिके नुन खाएर जीविका चलाउँदै आएका छन् […]